Zuva: Kurume 26, 2020
Twiti, uyo akatsanangura chiyero chegoronavirus cheGurukota rezvehutano Fahrettin Koca nemusi wa 26.03.2020, aive akadai: Nhamba yedu yekuedza yakanga iri 5.035 zuro. TODAY yaive 7.286. 1.196 kuongororwa kutsva kwakaitwa. Varwere uye masekete ekudzivirana aive ega. 16 [More ...]
TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ uye TÜDEMSAŞ Administrations United
TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ uye TÜDEMSAŞ MANAGEMENTS dzakabatanidzwa, uye TÜRASAŞ, kambani yakasimba zvikuru kupfuura kubatana uku, ichamiswa. Sese masisito zvipenyu zvipenyu zvinoumba mazita azvo mukufamba kwenguva. Nzvimbo yeTÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ [More ...]
Ulukışla - Boğazköprü Line Km: Kuvakwa kweVapfuura pa58 + 360 Nekuda kwe thenda, mutengo wakanangana weTurkey State Railways TCDD 2nd Nharaunda yeKutenga Service Directorate (TCDD) ndeye 2019/688316 uye ine mutengo unoenderana ne15.820.430,31 TL [More ...]
Dunhu reDenizli Metropolitan rinoenderera mberi nekuchenesa uye kurasa hutachiona nguva dzese munzvimbo dzekusangana vachipokana nekoronavirus, apo vagari vanotaura kuti vanogutsikana zvikuru nematanho akatorwa. Iyo yemaguta metropolitan coronavirus inoenderera isina kumbomira [More ...]
Veruzhinji Vemotokari Motokari dzinowanzo disinfiser ku Manisa
Manisa Metropolitan Municipality, wanga uchirwira zvakanyanya kurwisa coronovirus, irikuita disinokufa nguva nenguva mumotokari dzinotakura veruzhinji mudunhu rose. Manisa Metropolitan Municipality, iyo yakazivisa kukurudzira kuchenesa dambudziko re coronavirus, [More ...]
Corona Kuongorora kweRuzhinji Kutakura
Kutevera denderedzwa rakapihwa Ministry of Internal Affairs yeMetropolitan Municipality pamotokari dzinotakura vanhu, kambani iyi yakasimbisa kuongororwa kwayo. Kuti vatevedzere matanho acho, vatyairi vese vekutakura vanhu vanoshevedzwa kuti vanzwe manzwiro, nepo vafambi vanodiwawo. [More ...]
Veruzhinji Vemotokari Motokari dzinoraridzwa Kuenderera muBursa
Meya weMetropolitan Alinur Aktaş, avo vakapinda munhepfenyuro yehupenyu paakaunzi enhau uye vakapindura mibvunzo yevagari, seMetropolitan Municipality kuchengetedza vagari veBursa kubva kuhutachiona hwe covid-19 (coronavirus), inobata nyika yese. [More ...]
Bursadist gesture yevadzidzi
Kutambura kunowanikwa nevadzidzi vanoshandisa makadhi ekunyorera (Mabhureki) mukufambisa kweBursa nekuda kwe 'zororo rezvikoro' kunobviswa neMetropolitan Municipality. Tsvaka zvikoro zvose muTurkey 'coronavirus kutyisidzira nokuti' dzidzo pakati 16 March-30 April [More ...]
Pasinei nekuderera kweNhamba yeVapfuura muIzmir, iyo Nhamba yeMabhazi Haina Kuderedzwa
Nhamba yemabhazi haina kuderedzwa mu İzmir İzmir Metropolitan Municipality haina kuderera huwandu hwemabhazi, ayo ndiwo mota dzinoshandiswa zvakanyanya mukufambisa kwevanhu, kunyangwe kuderera kwehuwandu hwevanofamba kuitira kuchengetedza chinhambwe. "Zvifambiso zvevoruzhinji" zvakaburitswa nebazi rezvemukati [More ...]
Transportation Services yaiva Turkey TCDD pagore 2017 6461 mutemo vakaverengwa musi mazvake pamusoro pengarava chokufambisa rakavambwa kuva chikamu chezvinhu Turkish State Railways TCDD Transport Inc. kutakurwa na. ichi [More ...]
20 Peresenti ye Ankara Station Campus Yakagoverwa kuMedipol Commerce Area
TMMOB City Planners (ŞPO) Chamber Ankara Bazi yakazivisa iyo nhoroondo yehunyanzvi yakagadzirirwa Ankara Chitima Chiteshi Campus yakapihwa kuMedipol University, iyo yakavambwa neGurukota rezvehutano Fahrettin Koca. “Guta risingapindirani Guta uye Hutano [More ...]
Tram Services Inomiswa muBursa
Bursa Metropolitan Municipality yakazivisa kuti T19 neT1 tram masevhisi achamiswa mukati mekuyerwa kwemhando nyowani dzekoronavirus (Covid-3) matanho. Mukutaura kwakaitwa neBURULAŞ's social media account, T1 uye T3 tram kushanda kwave [More ...]
Nzvimbo dze 266 dzekutengeserana muBursa njanji dzekufambisa dzinotengwa kune imwe chete mutambi zvakare netairi yakabatana yenguva nyowani. Nzvimbo dzakasiyana-siyana dzekutengeserana muzvitima dzekutakurwa kweBursa dzave zvakare neine tendero yenguva nyowani [More ...]
Rakaoma Mhinduro kubva kuImamoğlu kuenda kuCanal Istanbul Tender
PresidentBB Mutungamiri Ekrem İmamoğlu vakaita yambiro nyowani nezve denda re coronavirus, iro rakabata nyika nenyika yedu nekumisa hupenyu. Kana haisi Turkey, kusimbisa kuti kutarisira kudzora pakatanga kurambidzwa [More ...]
Vanosvika mazana matatu evashandi vanoshanda mukuvaka Çelikler Holding's Ankara-Sivas High Speed ​​Chitima Project vakagadzikiswa mudzimba dzeHasanoğlan Science High Chikoro nekufungidzirwa kwe coronavirus. Vashandi vanoendeswa kunzvimbo yebasa nekutaura iyo 'test matokeo yakaipa' yemushandi ari kurapwa muchipatara [More ...]
zvichiguma Wuhan muguta China uye rwakapararira yose itsva mhando coronavirus-19 Covidien pamusoro Republic of Turkey General Directorate of State Railways riri sıklaştırıy matanho. TCDD, ichiita basa rayo nevashandi vakaremerwa maererano neMutungamiriri weNyika [More ...]
Istanbul Metropolitan Municipality; Iyo njanji yakanamatira zvimata uye mabrochure ayo yaigadzirira kuchengetedza kure kwakachengeteka munzvimbo yemetrobus nemabhazi kune mota dzinofamba nevanhu. Matanho ari kuwedzerwa nekuda kwekubuda kwe coronavirus, iyo inobata nyika yedu nepasi. [More ...]
Makambani mashanu akaendesa mabhezari ethenda inoitirwa yekuvakazve (kuvaka patsva) zvirongwa zvemberi Odabaşı uye Dursunköy mabhiriji mukati mechikamu cheCanal Istanbul chirongwa. Kuti igadziriswe nebazi rezvekutakura nezvivakwa, [More ...]
HAKUNA PROVINCE ANOGONESA MABHUKU EBHASHARA DZESHURE 1 ADANA ADANA DZEMHARAI HWEMHARA DZEMAHARA AdANA, NİĞDE, OSMANİYE, HATAY 2 ANKARA ANKARA UNIVERSITY MEDICAL FACULTY MEDICAL MICROBIOLOGY ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA. [More ...]
Gurukota rezvekutengeserana Ruhsar Pekcan razivisa kuti faindi yemamiriyoni gumi nemakumi mapfumbamwe nemakumi matanhatu TL yakaiswa kumakambani e198 akatsunga kushandisa mutengo wakakwenenzverwa. [More ...]